ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ဓာတုပစ္စည်း
ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2018
Raw Oxiracetam အမှုန့်သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကုသရန်အလားအလာအဖြစ်လေ့လာခဲ့သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်: 1180kg / လ
ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့်
ဓာတုအမည် 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား Nootropics မူးယစ်ဆေး
CAS အရေအတွက် 62613-82-5
InChIKey IHLAQQPQKRMGSS-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C6H10N2O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 158.15
အရည်ပျော် Point 165-168 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 494.6 mmHg မှာကို C ° 760
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 8 နာရီ
Storage Temperature ခြောက်သွေ့သော၊ မှောင်မိုက်သောကာလနှင့် ၀ မှ ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် (ရက်သတ္တပတ်များမှရက်သတ္တပတ်များ) သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်လများ (၂၀ လမှနှစ်) အထိ -0 C တွင်ရှိသည်။
Application Nootropic ။ psychostimulant လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Piracetam ၏ analog ။
ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့်တစ် Piracetam ဆင်းသက်လာသည်နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် excites, ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်အားပေးအားမြှောက်, သိသိသာသာတိုးပွါးခြင်းနှင့်အားပေးအားမြှောက်မှတ်ဉာဏ် retention ကိုများနှင့်ထိရောက်စွာအိုမင်းသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှုဆကျဆံတယျ။ ဒါဟာဦးနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ရောဂါ syndrome ရောဂါနှင့်စိတ်ရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အိုမင်းသောစိတ်ဖောက်ပြန်သို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာစွမ်းရည်ကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အာရုံကြောကမောက်ကမဖြစ်မှု, မှတ်ဉာဏ်ရောဂါနှင့်ထောက်လှမ်းရေးမမှန်ကုသမှုအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဒါဟာထဲတွင် Neurosis များအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူကုသမှု, ဦးနှောက်စိတ်ဒဏ်ရာ, encephalitis နှင့်အခြားဦးနှောက်ရောဂါများအဖြစ်ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအားသာချက်ကဆေးထိုးဘို့သင့်လျော်အောင်, ရေအတွက်အလွန်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနကုန်ကြမ်း Oxiracetam အမှုန့် Piracetam. နှိုင်းယှဉ်ပိုမိုမြင့်မား pharmacological လှုပ်ရှားမှုနဲ့သိသာ curative သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုပြသ
Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား
Oxiracetam အတန်အသင့်ကမူလတန်းယန္တရားအဖြစ် acetylcholine ၏လုံလောက်သောအဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် deliriant မူးယစ်နှင့်အခြားပုံမှန်အားဖြင့်သိမှုချို့ယွင်းပြည်နယ်များကနေပြန်လည်နာလန်ထူကူညီနိုင်ပါတယ်အကြံပြုခြင်း, ကြွက်လူဦးရေအတွက်နှင့်လူ့လူဦးရေအတွက်နှစ်ဦးစလုံး scopolamine-သွေးဆောင်သတိမေ့ခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားသည်။
Oxiracetam hippocampal ဆဲလ်အတွင်း acetylcholine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။ acetycholine မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်အတိုင်း, ဒီအလားအလာက၎င်း၏ nootropic သက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်နိုင်ဘူး။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5)
Enhanced နှုတ်ဖြင့် fluency
အကြံပြုထားသည် Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5) သောက်သုံးသော
oxiracetam ၏သောက်သုံးသော piracetam ၏ထက်လျော့နည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏလောက်ပါလိမ့်မယ်မဆိုလိုပါ။ ပုံမှန်သောက်သုံးသော 1200 မီလီဂရမ်၏အကွာအဝေးအကြားသည်နှင့် 2400 တစ်နေ့၏သင်တန်းကျော်ယူဖြစ်စေနှစ်ခုသုံးခုအတွက်အညီအမျှ (ထိုကဲ့သို့သော 400mg သို့မဟုတ် 800mg သုံးခုဆေးများကဲ့သို့) ကာလဟောဒီမှာပျံ့နှံ့ MG ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Oxiracetam အမှုန့် (62613-82-5)
Oxiracetam ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ oxiracetam ခေါင်းကိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရရုံ alpha GPC သို့မဟုတ် citicoline ကဲ့သို့သော choline ဖြည့်စွက်ပါ။
အဲဒါကိုပျော့လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိမသောကြောင့်သိပ်နောက်ကျသောနေ့၌ခေါ်ဆောင်သွားသည်မှန်လျှင်, oxiracetam အလားအလာပုံမှန်အိပ်စက်မှုသံသရာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဘူး။
အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ကွောကျ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ရှားပါးနေချိန်တွင်, ရံဖန်ရံခါ reported. အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများယေဘုယျအားအစောပိုင်းကသောနေ့၌ oxiracetam ယူပြီးသို့မဟုတ် dosage. လျှော့ချခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်ပြီ
ကုန်ကြမ်း Tianeptine hemisulfate monohydrate အမှုန့် (1224690-84-9)
ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9)
ကုန်ကြမ်း 6-Paradol အမှုန့် (27113-22-0)